Agbamakwụkwọ | KONGOLISOLO
Site na: KongoLisolona: July 25, 2020 00: 30 Enweghị asịsa
Ha na-ebula onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla. Agbanyeghị, na-enweghị mmetụta, enwere echiche ọzọ. Mgbe ụfọdụ ị ga-echefu ihe ọ dị ka ya wee cheta ihe ...	GỤKWUO
Site na: KongoLisolona: July 25, 2020 00: 20 Enweghị asịsa
"Arụmụka ahụ emeghe! Nwaanyị ahụ nke na-echere nwoke ahụ zuru oke B. Nwoke nke na-eche nwanyị zuru oke Lovehụnanya adịghị adị ... Eziokwu ka ọ bụ segha? Na amo ...	GỤKWUO
Site na: KongoLisolona: July 25, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Nwoke na nwanyi, onye obula na emekorita ibe ya “Nwoke n’enwe obi uto, ihe nwanyi a na - enwe a ,uri o bula a na - eweta	GỤKWUO
Site na: KongoLisolona: July 18, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Nwanyi isi ojii / ndi Africa, ya na ndi isi ojii / ndi Africa: Lee: o na-ele anya n ’ezi nnuku; Mara: ọ ma ezigbo ụkpụrụ ya; Ike: ọ nwere ike ịgbanwe ụwa ebe ...	GỤKWUO
Icheta: ndi nke Chineke nke Israel tib againuru ha ọzọ; onye "Het, onye nke Israel nke Israel"; nyere ndi umu nwanyi ndi n’achoghi di ike inwe ndi di n’enwe ike oge di
Site na: KongoLisolona: July 15, 2020 03: 12 Enweghị asịsa
Kọchụkwụ ahụ, onye nke Chineke nke Israel, gwara ụmụ nwanyị na-alụghị di, na ha na-esiko ọnụ ibe ha, ka ha wee chọta alụm. ...	GỤKWUO
Ikwusi ntụkwasị obi, ịkwụwa aka ọtọ, ịlụ karịa otu nwanyị, nkụda mmụọ, ihe mgbagwoju anya: oke nke nwoke ọ bụla na ịhụnanya ma ọ bụ na ịlụ di na nwunye; onye obula kwesiri idi, kedu ebe o no, o noo na udi ya
Site na: KongoLisolona: July 14, 2020 03: 24 Enweghị asịsa
1. Ezigbo ụmụ nwoke kwesịrị ntụkwasị obi. 2. Ndị ezigbo nwoke karịrị otu nwanyị. 3. menmụ nwoke nwere nkụda mmụọ na ndị nwere mgbagwoju anya lụrụ nwanyị na ndị na-ekwesịghị ntụkwasị obi. Eziokwu ka ọ bụ ụgha? Ezigbo KongoLisolobụ & KongoLisoloise ...	GỤKWUO